Pakistana: Nahatonga Resa-be Tao Amin’ny Aterineto ny Fanaratsiana ny Ara-politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Desambra 2011 7:29 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Italiano, Dansk, srpski, English
Ny anaran'ity tarika ity moa dia atao hoe “beghairat birgade” na “brigadin'ny henatra” — teny iray izay entina hanoherana ny ‘ghairat brigade’ na “polisy ara-môraly” tena malaza sy fantatra fa to teny ao Pakistan. Ilay lahatsary, nakarina ny alin'ny 16 Oktobra dia efa an'arivony no nijery azy maraina ny andro.
Raha niresaka tamin'ny haino aman-jery ilay tarika, dia nilaza fa ny antony nanapahany hevitra handefa ilay lahatsary tamin'ny aterineto dia noho ny fiheverany ny mety tsy fifankahazoan-kevitra momba ilay tononkira eo amin'ireo filazam-baovao mahazatra. Ankehitriny dia hita fa tena nety ho an'ilay tarika mihitsy ilay fanapahan-kevitra, tsy hoe nisy mpitsidika mihoatran'ny iray tapitrisa fotsiny ihany ilay lahatsary tao amin'ny Youtube fa nahasarika ny ankamaroan'ireo haino aman-jery malaza, ka anisan'izany ny BBC.
Ny tononkira feno fanaratsiana miaraka aminà lahatsary manana endrika fanesoana dia tena mahomby tokoa raha ho an'ny resaka aterineto manokana no lazaina. Ireo hira dia miresaka ny olana toy ny fanaovana tsikombakomba amin'ny ratsy sy mahakasika ny fihatsarambelatsihin'ireo olona izay manindrahindra ny fitiavana an'ilay mpamono olona Mumtaz Qadri, izay namono ny Governoran'i Punjab teo aloha Salman Taseer, sy Ajmal Kasab, tompon'antoka tamin'ny fanafihana tao Mumbai, sady niampy ny fanadinoana an'i Dr. Abdus Salam, izay hany nahazo ny “prix nobel” tao amin'ny firenena, satria izy avy ao amin'ilay sekta voarara ao Islam.
Nifarana taminà naoty feno fihantsiana ilay lahatsary miaraka amin'ilay mpihira fototra izay mitazona sora-baventy manao hoe: “Raha tianao ho gorobaky ny bala ny lohako, tiavo ity lahatsary ity.”
Sary azo tamin'ilay lahatsary
Tsy nahagaga raha ao amin'ny bilaogin-dry zareo, ity tarika ity dia milaza tena ho mpanohana fatratra ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra :
Matokia ny maha olombelona, ankahalao ireo izay manambany ny finoanao, ny fiavianao, ny kolontsainao na ny vondronao.
“Tsy ekeko izay nolazainao kanefa arovako hatramin'ny fahafatesana kosa ny zonao hiteny izany.”
Ireo fanehoan-kevitra teny amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao sosilay dia fifangaroana dera tafahoatra hatramin'ny fiampangàna mivatravatra:
@LutfIslam: Rehefa misy iray monja eritreritra manao hoe: “nihinan- tena ny vahoaka Pakistane,” dia tonga ny Baighairat Brigade mahafinaritra : http://bit.ly/qbRiNb
@Rabeeltariq:@NadeemfParacha: Tonga tamin'ireo tanora ny fikorontanan-tsaina hany ka nisafidy ny fomba tena mety indrindra izy ireo hanandratany ny feony.
@Maria_memon: Ny “Beyghairat Brigade” dia ho fantatra foana toy ireo tovolahy izay niteny nony farany hoe: “niboridana ny amperora” . http://bit.ly/w12iK8
@boghleharsha: Vao nahita an'i aalu anday avy amin'ny “beyghairat brigade”. Tena mahaliana tokoa. Ny zava-kanto hatrany no ahitàna ny fifanjevoana eo amin'ny fiaraha-monina.
@Zak_: Fa inona ity “Beyghairat Brigade’ (the Dishonour Brigade) ity? sarimihetsika vaovaon'ireo pseudo-liberaux …………
@TaimoorMalik : Manomboka matahotra ny “Beghairat Brigade” noho ny fanononana ny anaran'i Dr Salam tao amin'ny lahatsariny – izay hany olona tokana mba nahazo ny loka ” nobel”, saingy izy dia AHMADI! Izay no mba helony!
@Khandanish_: Misaotra anao #TSY “Beghairat Brigade” nanao izay nampalaza antsika taty Inde, tamin'ny alalan'i Ajmal Kasab kely. Tsy misy mieritreritra azy ho mahery fo mihitsy!
Manoratra i Raza Habib Raja :
Satria miampita amin'ireo mànana rà tanora ny fanevan ‘ny Rock N Roll, izay ny sasany tamin'izy ireo no nanam-pahasahiana nony farany niteny ny efa tokony ho notenenina hatry ny ela, misy antony mbola azo inoana fa eny an-jorony eny, dia mbola misy ny fahasalamana ara-tsaina. Tsara ry Baighairat Brigade .. Nanome fanantenana anay ianareo..
Notsoahina tao amin'ireo tsikeran'ilayy lahatsary Youtube ny ankamaroan'ireo tsikera diso tafahoatra sy feno fandrahonana. Kanefa na dia izany aza, ny fiantraikan'ilay lahatsary tamin'ny rehetra dia tena maha-te-hidera. Ny ezak'ireto “beghairat brigade” ireto dia lasa sava làlana ho an'ny haino aman-jerim-bahoaka ho fitaovana hanaovana hetsika ara-politika.